यस्तो छ कारण ! अविवाहित युवतीले शिव लिंगको पुजा किन गर्नुहुँदैन ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। के तपाइँलाई थाहा छ? शास्त्रले शिवलिंगको पुजा गर्न वा छुन अविवाहित नारीको लागि निषेध गरेको छ । यसको कारण आज हामी चर्चा गर्नेछौ ।देवताहरुमा महादेवलाई सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ देवता मानिन्छ । शास्त्रका अनुसार अविवाहिता स्त्रीले शिवलिंगको नजिक जाने अनुमति दिइँदैन । भगवान शिव **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
तपस्यामा हुने भएकोले चारैतीरबाट अविवाहित स्त्रीले घुम्न नहुने विश्वास छ।लिगंले योनीको प्रतिनिधित्व गर्छ । जुन देवी शक्तिको प्रतीक हो र महिलाको रचनात्मक ऊर्जा हो । शिव पुराणको अनुसार लिगं ज्योतिको प्रतीक हो । हाम्रो समाजको परम्परा अनुसार शिवलिगंको पुजा पुरुषद्वारा नै सम्पन्न हुनुपर्छ ।
भगवान शिवको पुजा गर्दा विधि विधानका धेरै ख्याल गर्नुपर्छ । देवता वा अप्सराले पनि भगवान शिवको पुजा गर्ने समयमा धेरै सावधानी पुर्वक पुजा गर्नुपर्छ।तपस्यामा रहेका देव का पनि देव महादेव तपस्या भंग नहोस् भनेर अविवाहित महिलाले शिव लिगंको पुजा गर्नु हुँदैन ।
अविवाहित महिलाले भगवान शिव र माता पार्वतीको एकै साथ पुजा गर्न सक्छन् । यदि १६ वटा सोमबार भगवान शिवको व्रत राखेमा कुमारी कन्याले राम्रो वर पाउनेछन् । विवाहित महिला व्रत बसेमा पतिको आयु लामो हुने विश्वास छ।तीनै लोकमा भगवान शिवलाई एक आदर्श पति मानिएको हुनाले उनको व्रत
बसेमा उनी जस्तै आदर्श पति मिल्छ वृषभ शिवको वाहन हो । उ सधै शिवको साथमा हुन्छ । वृषभको अर्थ धर्म हो । महादेवको चार खुट्टा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष हो ।समस्त भुतहरुको अस्तित्व मेटाएर परआत्मा (शिव) ले आत्मा साधाना गर्ने दिन शिव रात्री हो ।
यसैगरी हिन्दू धर्ममा सबै देवी-देवताको पूजामा चामलको प्रयोग विशेष रुपमा हुने गर्छ । चामल बिना पूजा पूर्ण भएको मानिदैन । पूजामा प्रयोग हुने चामललाई अक्षता पनि भनिन्छ । कुनै पनि पूजामा सिम्रिक, बेसार, अबिर तथा केसरीको साथै अक्षता चढाइन्छ ।
चामलसँग जोडिएका विशेष्ता:पूजा कर्ममा देवी-देवतालाई चामल चढाइन्छ । साथै कुनै व्यक्तिलाई निधारमा टिका लगाउँदा पनि अक्षताको प्रयोग गरिन्छ । अक्षता पूर्णताको प्रतिक पनि हो । किन भने यो टुक्रिएको हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् :ज्योतिष शास्त्रको अनुसार ,हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिवनमा सफलता हँसिल गर्नको निम्ति केही उपाय वा नियमहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। शास्त्रमा बताएका यी कुराहरुमा ध्यान नपुग्दा समेत जीवनमा सफलता हँसिल गाह्रो हुन्छ। आज हामी तपाईहरुलाई धन नोक्सान हुनबाट बच्ने ५ उपाएहरु बताउन जाँदै छौँ जसबाट तपाईले आफूले आर्जन गरेको पैसा सजिलै बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
रातको समयमा आफू सुत्ने बिस्तारा नजिकै एक लोटा दूध भरेर राखी विहान उठ्ने बितिकै बरको फेदमा चढाउनुहोस्। यसो गर्दा तपाईको धन नोक्सान हुने समस्याबाट छुटकारा पाउनुको साथै अधिक धनलाभ गर्ने अवसर मिल्नेछ।हरेक सोमबार शिवलिङ्गमा काँचो दूध चढाउने गर्दा तपाईले कुण्डलीको दोषबाट
मुक्ति पाउनको साथै धन नोक्सान हुन बाट मुक्ति मिल्नेछ। यसका साथै सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दा प्रसस्त धन सम्पति कमाउन सकिने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी बिहिवारको शिवलिङ्गमा हलेदोको डांठ चढाएमा जीवनमा आइपर्ने हरेक समय तथा बाधाहरु नास हुने र धन लाभ गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास रहेको छ।शुक्रबारको दिन माता लक्ष्मीको पूजा आराधना विशेष रहने भएकाले यस दिन लक्ष्मीको मूर्ति सम्म पुग्न नसक्दा पनि घरमा
राखिएको तस्बिर अगाडी बसेर ॐ श्रीं नमः मन्त्र १०८ पटक जप गर्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा माता लक्ष्मी प्रसन्न हुने र धन नोक्सान हुने समस्याबाट मुक्ति मिल्ने गर्छ।